မြန်မာမွတ်စ်လင်မ် စည်းလုံးခြင်း၏အင်အား: July 2011
Posted by Ordinary person at 6:35 PM No comments:
Posted by Ordinary person at 2:37 AM No comments:
ငယ်စဉ်ကလေးဘဝ လမ်းမလျှောက်တတ်ခင်မှာ မိခင်က ကလေးငယ် လက်ကိုတွဲပြီး တစ်လှမ်းခြင်း တစ်လှမ်း လမ်းလျှောက်တတ်အောင်သင်ပေးခဲ့တယ်။ ခွဲစိတ်ကုသပြီးသောလူနာတစ်ယောက်မှာ အရင်လိုပြန်လမ်းလျှောက်နိုင်အော​င် တစ်လှမ်းပြီး တစ်လှမ်းပြန်ကျင့်နေချိန်မှာ ဟိုး.... ငယ်ငယ်ကမိခင်ရဲ့ နွေးထွေးစွာပြုစုထွေးပိုက်မှုတွေ၊ တစ်လှမ်းခြင်း လမ်းလျှောက်တတ်အေ...ာင်သင်ပေးတာတွေကို ပြန်လည်သတိရမိတယ်... ချစ်သူခင်သူတွေရှိပါသော်လည်း မာတာမိခင်၏ မေတ္တာသည် တုနှိုင်းမဲ့မေတ္တာ.... မိခင်များကို လှပတဲ့နှလုံးသား၊ ဇွဲ၊ သတ္တိ အရည်အချင်းများနဲ့ဖန်ဆင်းပေးတဲ့​ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကို ရှကုရ် ကျေးဇူးမျာရင့်ကျူးလျက်...။
1. "We have enjoined on man kindness to his parents; in pain did his mother bear him, and in pain did she give him birth" (QURAN 46:15).
And out of kindness, lower to them the wing of humility, and say: ‘My Lord! bestow on them Thy Mercy even as they cherished me in childhood' "(QURAN 17:23-24) .... အာမီးန်။
Posted by Ordinary person at 6:08 PM No comments:
Ref : News The Local
Posted by Ordinary person at 1:25 PM No comments: